Britain ngu zemininingwane - 8 Ngaphakathi nangaphandle kwe-Track Amathiphu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba iBrithani > Britain ngu zemininingwane - 8 Ngaphakathi nangaphandle kwe-Track Amathiphu
YaseBrithani enibusisiwe bedla ujantshi inethiwekhi okuyinto uye wathonya nomphakathi yayo umlando kanye nokuthuthukiswa komnotho ukuze izizukulwane.
Futhi uma ungumuntu ujantshi Umthandi womculo, kukajantshi UK iholide kusiza imisebenzi elithakazelisayo ezindaweni yonke indlela esuka Aberdeen ukuze Penzance.
Ngakho uma isethi inhliziyo yakho lapho ebona Britain ngesitimela, nazi eziyisikhombisa futhi amathiphu off-ithrekhi.
Ukuvakashela Glasgow Central Station uyisidingo - ngeke nje ke ukukuxhumanisa Scotland sika okujabulisa ebabazekayo, kodwa futhi unalo 91 amaphesenti ukwamukelwa izinga kusuka wabathengi Ezokuthutha Focus, esiteshini master uPawulu Lyons siphela izinkambo emane ngosuku futhi adlale siqu BBC TV ewuchungechunge yayo.
Birmingham okusha Street
IBirmingham New Street ngesinye isiteshi esinezinga eliphakeme lokwaneliseka kwamakhasimende. EWest Midlands wesitimela ihabhu ukuthi redeveloped ngokugcwele 2015 futhi inama kukhethwa zokudla cool, kufaka phakathi ukuhlangana okuhlangene endlini kwe-Five Guys burger - okulungele ukumiswa komgodi.
AmaKhosi Cross Station
Ayikho real ujantshi Umthandi womculo uzongishiya Britain ngaphandle ngokuphelele ukuhlola YeNkosi Cross Station yaseLondon. Kuyinto eduze Cross YeNkosi St Pancras Underground Station, eduze Regent sika Park kanye neBritish Library, nekhaya ku-Platform engaqondakali 9 ¾, iphuzu maqondana Hogwarts Express - ngokwanele wathi.
Izincwajana zemininingwane lokusebenza Raildar sibonisa ibalazwe bukhoma zonke isitimela ku-UK inethiwekhi wesitimela - version ashukumisayo ngisho kubonisa ezitimeleni emhlabeni. fantasy lokusebenza Lokhu lover isitimela zihlanganisa ithrekhi izakhiwo kanye kwalapho amabalazwe - yini umqondo omuhle!
5. Ukufundwa Khanyisa
Uma uku emva riveting lehambisana nekufundza leyentiwa ngeziteshi, Lines Parallel ubona kumbhali Ian Marchant sibheke wry ngesikhathi 175 neminyaka kukhathazeka yaseBrithani nge izitimela. Eyabhalwa inkanuko amahlaya, kungcono i siqonde ugqozi phakathi uhlamvu namasiko British.
6. Ukufunda for abathanda bangempela
Ngasekupheleni kwawo 19th futhi ekuqaleni kuka 20th Emakhulwini eminyaka, George Bradshaw sika ujantshi iziqondiso kwakungamadodana zokusebenza osuku lwabo futhi enikeziwe ukwaziswa kwamuva imizila isitimela emhlabeni Britain nakuyo ezwekazini laseYurophu. I April 1910 Umhlahlandlela ubhalwe esiqongweni esingenakulinganiswa senethiwekhi yezitimela yaseBrithani futhi usephenduke ibhayibheli labalandeli bakaloliwe - thola izinhlelo ezinyatheliswe kabusha online ku-Amazon.
7. Online yokufunda
Ukufinyelela kwe-inthanethi mahhala noma ngentengo ephansi kutholakala kalula emizileni eminingi yezitimela yase-UK nasezikhungweni zedolobha, ngakho uma wakho uhambo iyingxenye eside ayihlala, ufundela i degree inthanethi ne ukuthandwa Anglia Ruskin Ukufundela Ungaqhubeka ungaphazanyiswa. Futhi kukhona ukuphila-ukuze aqinisekise mayelana ukuxoxa nabo emazweni ahlukahlukene ngenkathi Roll emhlabeni emikhawulweni nakuyo clifftops.
Landela lezi eziyisikhombisa ngaphakathi nangaphandle kwe-ithrekhi amathiphu kukajantshi iholide British awusoze ukhohlwe - ukukubona esiteshini.
Ingabe unayo amathiphu wesitimela travel? Yabelana nabo esikhaleni sokuphawula futhi uma kudingeka isitimela – Londoloza A isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbritain-by-train-8-on-and-off-track-tips%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ukrail britain britrail wesitimela ujantshi phungingland